Tsvaga maitiro ekushongedza imba yako neyevintage boho maitiro | Bezzia
Maitiro ekushongedza neyevintage boho maitiro
Susana Garcia | 26/04/2021 20:00 | Decoration, Kushongedza maitiro
La kusanganiswa kwezvitaera pakushongedza Icho chimwe chezvinhu zvakanakisa zvatingaite, nekuti zvinotipa rusununguko rwakawanda kana zvasvika pakutsvaga zvidimbu uye kurudziro. Ichokwadi zvakare kuti masitayera dzimwe nguva akabatana uye zvinonzwisisika kunzwisisa imwe isina imwe. Semuenzaniso, iyo vintage maitiro aripo kwazvo mune vamwe senge maindasitiri kana boho chic. Mune ino kesi tichaenda kunoona maitiro ekushongedza mune vintage boho maitiro.
El vintage boho maitiro anoshandisa runako uye nyore kweye bohemian maitiro pamwe nekubata kwakasarudzika kwezvimedu zvevintage zvine nhoroondo uye hunhu. Pasina kupokana ndeimwe yemisanganiswa yatinofarira zvakanyanya nekuti tinogona kugadzira nharaunda dzine hunhu hwakawanda uye nemaitiro asingaenzanisike.
1 Makara munyika yeboho
2 Zvirimwa zvakakosha
3 Kubata kwekumwe
4 Zvimedu zvevintage
5 Usave uchimhanyira kushongedza
Makara munyika yeboho
Zvichida chinhu chakaomesesa kusanganisa uye kubatanidza mune yekushongedza boho maitiro ndiwo mavara, nekuti hapana chete musanganiswa. Muchimiro cheNordic matoni ekutanga anoshandiswa uye mupfungwa iyi zviri nyore, asi munyika yeboho kutaridzika kwakanyanya kunotsvakwa nematoni anowanzo kudziya. Vanogona sanganisa matoni epasi, mamwe matsvuku, maronda, orenji uye kunyange bhuruu kana girini. Izvo zvese zvinoenderana nenhamba yemavara atinoda kuwedzera. Sezvo paine rusununguko rwakawanda, tinogona kushandisa matoni akasiyana siyana uye kunakidzwa nawo. Ehe, isu tinofanirwa kutiza kubva pane zvakawandisa, nekuti kana tine ruvara rwakawandisa tinogona kupedzisira taneta. Shandisa rakanyanya toni toni senge beige uye yakaputsika machena machena uye pamusoro pavo inowedzera machira nemaprints uye akanaka mavara.
Zvirimwa kuwedzera kukuru kune chero kushongedzwa uye imba, asi mune vintage boho maitiro ivo vanenge vanogara varipo. Unogona kushandisa hari dzakasiyana, dzimwe dziine vintage dhizaini, senge terra cotta, kusanganisa masitaera. Miti mikuru kana cacti yakanaka. Iwe unogona zvakare kusungirira zvimwe zvirimwa nemapoto echechet, ayo ave mufashoni zvakare uye akakodzera kusanganisa aya masitaera. Iwe unogona kugadzira kona izere nemiti.
MuBhoho chic isu tine yekubata bata asi zvakare iri kuratidzwa kwehupenyu hwebohemian, umo kufamba uye tsika dzekunze zvine nzvimbo yavo. Ndokusaka pazviitiko zvakawanda tichigona kuona zvidimbu kubva kune dzimwe tsika mune ino dhizaini. Kana iwe zvakare ukasarudza chimwe chinhu chemazambiringa iwe unenge uine akakwana kubata. Usatya kusanganisa uye sarudza zvidimbu zvaunoda, kunyangwe zvisiri zvetsika, nekuti uyu ndiwo mweya wemaitiro aya.
Kune akawanda mazano akasiyana muvintage dhizaini, asi pamusoro pezvose, zvokwadi uye zvekare zvidimbu zvinotsvakwa, izvo zvisati zvadzoswazve kana izvo zvisiri kungoteedzera kwechimwe chinhu chekare. Kune izvi unogona kutsvaga mumatanho, sezvo mavari unogona kuwana zvidimbu zvinonakidza, nenhoroondo yavo uye nehunhu. Kusarudza zvidimbu zvakasarudzika ndeyechinyakare muchimiro cheboho, nekuti iwe haudi kuve neimba senge yevamwe vese, zvichibva pamafambiro, asi chimwe chinhu chakasiyana uye chakasiyana.
Usave uchimhanyira kushongedza
In the vintage boho maitiro zvidimbu zvinofanirwa kuve zvakakosha, saka zvinogona kunge tisingazowana zvese kamwechete. Izvo zvakakosha kuti utore nguva yekusarudza zvidimbu uye ruzivo, tichitsvaga zvinhu izvo zvatinoda kugadzira mamiriro akakwana mumba medu. Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uch ‘'fanera' 'fanicha Iko hakuna kumhanyisa kana zvasvika pakutsvaga zvidimbu zvevintage nekuti izvo zvatinoda hazviwanzo kuoneka pakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Maitiro ekushongedza neyevintage boho maitiro
Bold mavara musanganiswa weichi chitubu